Isitya sokuhlambela ngaphandle sisebenziseka ngokwenene! Kodwa ukuba awunikeli ngqalelo kwezi ngongoma zisi-5, kamva kwingxaki eqhubekayo!
Ikhaya / Blog / Isitya sokuhlambela ngaphandle sisebenziseka ngokwenene! Kodwa ukuba awunikeli ngqalelo kwezi ngongoma zisi-5, kamva kwingxaki eqhubekayo!
2021 / 04 / 06 uhleloBlog 1245 0
Ngaba kuphazamisana kangakanani ukuba negumbi elinye lokuhlambela ekhaya? Umzekelo, ngentsasa yaphakathi evekini, kuya kufuneka aye kwindlu yangasese, kufuneka uhlambe, akunakulinganiswa ngexesha elinye! Kwaye uyilo lwesitya sokuhlambela ngaphandle, lunokusombulula le ngxaki, hayi ukuphucula ukusetyenziswa kwegumbi lokuhlambela kuphela, kodwa nokwahlula ngokupheleleyo okumanzi nokwomileyo, kukwalungele namakhaya amancinci ~
Uyilo lwesitya sokuhlambela kukususa isitya sokuhlambela ngaphandle kwegumbi lokuhlambela, indlu yangasese kunye neshawa kwindawo enye, isitya sokuhlambela esikwenye indawo, ezi ndawo zimbini aziphazamisani, ngelixa ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imbambano kungazukwenzeka.
Kuba indawo yokuhlambela incinci, emva kokuhambisa isinki ngaphandle, inokunyusa indawo yendawo emanzi ngaphakathi, ingasabonakali ijongeke kakhulu! Ke kulunge kakhulu kumakhaya amancinci.
Ukongeza ekuqinisekiseni ukwahlulwa okumanzi nokomileyo kunye nokusetyenziswa ngokulula, isinki nayo icocekile kwaye icocekile.
Ngaphandle kokwahlulwa okumanzi nokomileyo, iitawuli, iibrashi zamazinyo kunye nezinye izinto eziyimfuneko mihla le, ziya kuba kwimeko emanzi ixesha elide, kulula ukuzalisa iibhaktheriya. Isinki iya kukhutshelwa ngaphandle, akusayi kubakho ngxaki, indawo engaphandle yomile kakhulu kunegumbi lokuhlambela.
Ukongeza, xa usenza isinki ngaphandle, le micimbi ilandelayo ayifanelanga ukungahoywa.
Akukho mbhobho wokuhambisa amanzi ngaphandle kwegumbi lokuhlambela, ukuze usombulule ingxaki yamanzi asezantsi naphantsi, ulwakhiwo kufuneka lutsale umbhobho othe nkqo ngaphambili kusinki.
Ukujonga ukuba ukusetyenziswa kwamanzi akukho kuncinci, indawo engaphandle kufuneka ingangenwa ngamanzi! Udonga lwesinki kunye nomhlaba ongezantsi kufuneka upeyintwe ngokungangenwa kwamanzi ukunqanda ukuvuza kwamanzi okukhokelela kubumdaka nokubumba eludongeni.
Ngokubhekisele kumaleko okungangenisi manzi, kungcono ukupeyinta indawo ukusuka emhlabeni ngqo phantsi kwesinki ukuya kwi-1.5m ngaphezulu kwendawo yokuma kwedinki.
Udonga luyacetyiswa ukuba uncamathisele iithayile ezilungileyo, emva kwayo yonke loo nto, xa kuthelekiswa nepeyinti ye-latex, iphepha lodonga kunye nezinye izinto, ubuchule bokungena manzi ngetayile yeyona nto ibalaseleyo, kukho amanzi atshiziweyo kwisula.
Njengakwiindonga, umgangatho ukwacetyiswa ukuba usebenzise iithayile, ukuba ufuna ukubeka iplanga, khumbula ukubeka ilitye elincomekayo ecaleni kwesinki, ukuze ezi zinto zimbini zibe nefuthe lokwahlulahlula.
Isinki kufuneka yenziwe kuthintelo lwamanzi ukuthintela amanzi kwitafile ukuba ihlale emhlabeni, kungcono ukwenza ngaphambi nasemva, kodwa nokukhusela amanzi ukuba angangeni eludongeni ngesikhewu. Musa ukucinga ukuba umqobo wamanzi awusebenzi, umphumo wofakelo ungcono kunokuba ungafakwanga!
Emva kokuba isitya sokuhlambela sikhutshiwe, ungaziva unganxibanga kwaye ungathandeki, ke ukuba kukho indawo eyaneleyo, unokwenza isahlulelo sokugubungela, njengeglasi yesakhelo esimnyama, ulwahlulo olungenanto lukhetho olulungileyo ~
Ngaphambili :: Eli ligumbi lokuhlambela, eliNdlu lakho liNdlu yangasese-Iindlela ezintsha zoYilo lwegumbi lokuhlambela ngo-2021 next: I-3, ~ 8, Design yoyilo yegumbi lokuhlambela, Izitayile ezahlukeneyo ekunokubonelelwa ngazo